Ciidanka Danab oo weeraray saldhig Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka Danab oo weeraray saldhig Shabaab
Ciidanka Danab oo weeraray saldhig Shabaab
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha Dhexe Ciidanka Danab ayaa maanta weerar qorsheysan ku qaaday saldhig Millitari oo ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin degaan Gobolkaasi ka tirsan.
Xarunta Millitari ee Ciidanka Dowladda Federaalka ay weerareen oo ku taalla degaanka Jameeca Jilliyaale ee Galbeedka Gobolka ayaa waxa ay aheyd goob lagu tababaro dhalinyarada Shabaab ka tirsan, sida dadka degaanka ay inoo sheegeen.
Ciidanka weerarka qaaday iyo Shabaabkii saldhigga ku sugnaa ayaa waxaa halkaasi ku dhexmaray dagaal kooban oo hubka nuucyadiisa kala duwan ay isku adeegsadeen dhinacyada, taasi oo dadka degaanka ay ka muujiyeen cabsi.
Wariyaha warbaahinta Risaala soo xiganaya dadka degaanka ayaa soo sheegaya in Ciidanka Danab ay halkaasi ku dileen sarkaalkii Shabaab u qaabilsanaa saldhigaasi, Shan ka mid ah ilaaladiisa iyo Shan ka mid ah dhalinyarada halkaasi tababarka ku qaadaneysay.
Ciidamada Danab ee sida gaarka ah u tababaran ee weerarkan fuliyay oo markii hore ka yimid degaanka Balidoogle ayaa dib ugu laabtay degaankaasi weerarka kadib, sida dad goob joogalaal ah ay inoo sheegeen.
Warar madax banaan ayaa sheegaya Shabaabka la weeraray in halkaasi ay ku tababaranayeen mudo ku siman Lix bilood, xerada la weeraray ayaa waxaa tababar lagu siinayay dhalinyaro Shabaab ka tirsan oo Gobolada dalka laga kala keenay.
Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka ee Gobolka Shabeellaha Dhexe weli si faah faahsan ugama aysan hadlin weerarkan ka dhacay degaanka Jameeca Jilliyaale, sidoo kale Shabaab dhankooda iyaguna ma aysan ka hadlin weerarkan.